Submitted on: Sun, 03/21/2021 - 14:18
Read more about व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालनका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना !!!
Submitted on: Mon, 03/01/2021 - 15:37
Read more about षडानन्द नगरपालिका वडा नं १ को कार्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना !!!
Submitted on: Wed, 02/10/2021 - 21:11
Read more about ४ नं वडा कार्यालयको भवन निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !
Submitted on: Fri, 02/05/2021 - 23:04
Read more about कृषि सम्बन्धी ओखर र किवीको विरुवा खरिद कार्यको अत्यन्त्य जरुरी सूचना !!!
Read more about दिंला बजारमा निर्माण गरिएको फालिचौतारा (भवन) पसल तथा व्यवसाय सञ्चालनार्थ भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना !!!
Submitted on: Mon, 12/28/2020 - 14:00
Read more about ४ नं वडा कार्यालयको भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना !!!
Submitted on: Fri, 12/18/2020 - 17:45
Read more about दिङ्ला बस पार्क, दिङ्ला सतिघाट सडक निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !
Submitted on: Sun, 11/08/2020 - 17:35
Read more about षडानन्द मा.वि. दिङ्लाको भवन निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने बारे !!!
Submitted on: Sun, 11/01/2020 - 13:34
Read more about षडानन्द मा.वि. दिङ्लाको भवन निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने बारे आशयको सूचना !!!
Submitted on: Tue, 10/13/2020 - 20:52
Read more about हाटबजार कर सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!